फोनबाटै आशिर्वाद लिएर खानपिन र सरसफाईमा ध्यान दिदै दशै मनाउ – Rajmarg Online
घोराही, ९ कार्तिक । सामाजिक सञ्जालबाटै आशिर्वाद ग्रहण गरी खानपिन र सरसफाईमा ध्यान दिदै यसवर्षको दशै मनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुझाव दिएका छन् । कोरोना कहरकैबिचमा नेपालीहरुको महान् पर्व विजया दशमी भित्रिएको छ । संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेकाले सरकारले पनि यसवर्षको दशैँ जो जहा छ, त्यही स्वास्थ्य सजकता अपनाउदै मनाउन अग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगत बहादुर शाहि अंगतबहादुर शाहीले देउतालाई मनदेखी सम्झिएर घरबाटै सजकता अपनाउदै यसवर्षको दशै मनाउनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।
देबी देउतालाई मन देखी सम्झिएर घरमै बसेर दशै मनाउनु पर्छ । संक्रमणको अनुसन्धान गर्दा धेरै संक्रमितको स्रोत पत्ता नलागेको केस धेरै भैसकेकाले समुदाय स्तरमा संक्रमण पैmलिसकेको बेला दैशैँ भित्रिएको छ । वर्तमान समयमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना निकै फितलो देखिन्छ, त्यसैले यसवर्ष अध्ययन लागी वा अन्य कुनै वाहानमा घरदेखि बाहिर रहेकाबाट संक्रमण सजिलै बस्ति बस्तिमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । यसका लागी सबै सचेत हुन जरुरी छ । लक्षण देखिएकालाई मात्र कोरोना परिक्षण गर्ने निती छ तर संक्रमण भने कुनै पनि लक्षण नदेखिएको ब्यक्तिले पनि फैलाउन सक्छ । त्यसैले कोसँग कोरोना छ, को सँग छैन् यसै थाहा हुदैन् ।
त्यसैले संक्रमणले विशाल रुप लिए पनि मर्ने अवस्थाका संक्रमित निकै थारै हुने गरेका छन् र यसलाई बढ्न नदिनको लागी पनि तपाई हामी सबै सचेत हुन जरुरी भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख शाहिले बताउनु भयो । होम आईशोलेशनमा बसेका संक्रमितलाई कुनै पनि हालतमा घुलमिल हुन दिनु हुदैन्, यसो गरेमा घर परिवार नै संक्रमित हुने खतरा धेरै हुने उहाले बताउनु भयो । फिजिसिएन डा. जितनारायन यादवका अनुसार जव सम्म कोरोनाको भ्यक्सिन आउदैन तव सम्म हामीले स्वास्थ्य सजकता अपनाउन जरुरी छ ।
त्यसैले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसवर्षको दशैलाई कुनै रौनकताका साथ होईन् । कोरोना बिरुद्ध सजकता अपनाउदै मनाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले अन्य वर्ष जस्तै गरेर टाढा टाढाबाट टिका ग्रहण गर्न आउने र नया ठाउमा घुमघाम गर्न जाने जस्ता कुरालाई सबैले स्थगित राख्नु पर्छ । चाडपर्वको समयमा बिशेष त खाने कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अहिले कोरोना कहरका कारण धेरै नागरिक घरभित्रै भएकाले र सरसफाईका साथै खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिएकाले अन्य सरुवा रोगको प्रकोप काम भएको छ । चाडवर्पको नाममा खानपिन र सरसफाईमा ध्यान दिईएन भने पुनः त्यस्ता स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छन् । त्यसैले खानपिन र सरसफाईमा बिशेष ध्यान दिन फिजिसिएन डा. जितनारायन यादवको सुझाव छ ।
यो दशैमा मान्यजन टाढा भएकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, भिडियो कल जस्ता माध्यमबाट आशिर्वाद लिन जरुरी छ । त्यसैले भौतिक दुरी, खानपिन र सरसफाईमा ध्यान दिदै दशै मनाउन यादवले सुझाव दिनुभयो ।